Ebumnuche 6 maka ịtọgharịa WordPress Blog | Martech Zone
WP Tọgharia bụ ngwa mgbakwunye na-enye gị ohere ịtọgharịa saịtị gị ma kpamkpam ma na ebe ọ bụ naanị akụkụ ụfọdụ nke blog gị gụnyere na mgbanwe ndị ahụ. Ntọala zuru oke bụ nkọwa onwe onye mara mma, na-ewepu akwụkwọ niile, ibe, ụdị ụdị post, nkọwa, ntinye mgbasa ozi na ndị ọrụ.
Omume ahụ na-ahapụ faịlụ mgbasa ozi (mana anaghị edepụta ha n'okpuru mgbasa ozi), yana njikọta dị ka plugins na ebugo isiokwu, yana isi njirimara nke saịtị - aha saịtị, adreesị WordPress, adreesị saịtị, asụsụ saịtị. , na ntọala ngosipụta.
Y’oburu n’acho iweputa ihe di n’iru, ndia bu nhota gi:
Na-agafe agafe - a na-ehichapụ data niile na-agafe agafe (gụnyere kubie ume, ndị na-abụghị kubie ume na ndị na-enweghị nne na nna ndenye akwụkwọ)
Bugote data - a na-ehichapụ faịlụ niile ebugo na C: \_ folda htdocs \_ wp \_ wp-content \_ uploads
Okwu isiokwu - hichapụ nhọrọ na mods maka gburugburu niile, na-arụsi ọrụ ike na adịghị arụ ọrụ
Nhichapụ isiokwu - hichapụ isiokwu niile, na-ahapụ naanị ndabara WordPress isiokwu dị
plugins - a na-ehichapụ ihe mgbakwunye niile ma e wezụga WP nrụpụta
Tebụl omenala - a na-ehichapụ tebụl omenala na wp_ prefix, mana isi tebụl niile na ndị na-enweghị wp_ prefix
.htaccess faịlụ - hichapụ faịlụ .htaccess dị na C: /folder/htdocs/wp/.htaccess
Ọ dị ezigbo mkpa ịkọwapụta na omume niile bụ nke ikpeazụ na enweghị ike ịgbanwe agbanwe, n'agbanyeghị ụzọ ị na-aga, yabụ jide n'aka tupu ịpị bọtịnụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe bụ ọnọdụ nwere ike ịchọ nchịkọta akụkọ ntanetị / saịtị, echegbula. Anyị achịkọtara ndepụta isii kachasị kpatara nke nwere ike ibute ihe a. Na-enweghị oge ọzọ, lelee ma ọ bụrụ na blog gị nọ n'ihe ize ndụ nke ịtọgharịa:
Otu n'ime ihe mbu nke batara n'uche mgbe ị na-atụgharị uche ịtọgharịa blọọgụ bụ mgbe ị gbanwere site na mpaghara / nkeonwe na ọha. Mgbe ị na-amalite n'ọhịa nke mmepe weebụ, ma ọ bụ ọbụlagodi naanị blog na-achịkwa nzọ gị kachasị mma bụ ịmalite site na ihe ọ bụla na-enweghị mmebi ọ bụla nwere ike ime. Ma ọ bụ saịtị dị na mpaghara ma ọ bụ nke nzuzo ọ dịghị mkpa, ihe dị mkpa bụ ịnwale ihe niile ị nwere ike ịhụ wee hụ otu ihe si arụkọ ọrụ ọnụ - plugins, scripts, themes, etc. Ozugbo ị nwetagoro ikike gị ma nwee mmetụta oge erugo ime mgbanwe ahụ maka ezigbo azụmaahịa karịa karịa ịgaghị achọ ịme ya site na mpempe akwụkwọ dị ọcha.
ebe ọ bụ na malite ma na-eme ọtụtụ ule, na-arịọ arịrịọ n'ezie na-amụta ka ị na-aga, a ga-a buildup nke na-emegiderịta iberibe gafee osisi. Ohere inweta bụ, nsogbu ndị a ga-agbanye mkpọrọgwụ na ntọala nke kachasị mfe iji bido ọhụụ bụ iweghachi ya n'ịrịọ. Ihe omuma ohuru gi, mgbe ahu i gha enwe ike bido idi ocha ma zere nmehie nile ndi biara tupu.
Ihe juru na sọftụwia
Na-esochi mmụta / ule blog, enwere ọnọdụ ebe ọtụtụ nsogbu yiri nke ahụ nwere ike ibilite na blọọgụ dị ndụ. Nke a nwere ike bụrụ eziokwu karịsịa na saịtị ebe saịtị ahụ dị ogologo oge ma nwee, n'oge ahụ, nyere ọtụtụ ọdịnaya dị iche iche. Iwu nke isi mkpịsị aka bụ na ka ị na-enyekwu ọdịnaya, ihe ngwanrọ na-apụtaghị ìhè ị ga-akwado iji kwado ya niile.
Na-akwado webshop, ị chọrọ ngwa mgbakwunye iji mee ya, ị chọrọ ndebanye iji lelee ụfọdụ ma ọ bụ ọdịnaya gị niile, ịchọrọ ngwa mgbakwunye, ị nwere ngalaba dị iche iche nwere ọdịnaya dị iche iche na ibe dị iche iche, ịchọrọ isiokwu dị iche iche iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ha. Ndepụta ahụ na-aga n'ihu.
Eleghị anya ị ga - agbakwunye njikọta dịka ịchọrọ ha, na - echegbula ọtụtụ ihe banyere ndị ahụ fọdụrụnụ ma nwee ike imegide ndị ọhụrụ ị na - etinye. Kwado ihe ngwọta dịgasị iche iche, ka ọ bụrụ mgbakwunye mgbakwunye, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ibe ha, ka oge na-aga, ọ ga-aghọrọ ọgba aghara.
Nke mbu maka gi na azu na ihe kachasi nma nye ndi nleta gi na frontend. Ọ bụrụ na ọ, n'eziokwu, abịarute nke ahụ, ọ gafeela oge maka ihe ọ bụla mana nrụpụta zuru ezu. Ọzọkwa, enwere ike itinye ihe ngwọta nke ọ bụla n'ọrụ, mana ọ ka dị oke egwu ebe a iji rụọ ọrụ ahụ ngwa ngwa n'ihi na saịtị ahụ meghere ọha na eze. Ebe ọ bụ na ọtụtụ saịtị na blọọgụ n'oge a nwere, ma ọ dịkarịa ala, ụfọdụ ụdị nkwado ndabere, mgbe nrụzigharị ị ga-enwe ike kụrụ ala na-agba ọsọ ọsọ.
Mgbanwe nke ọdịnaya ọdịnaya
Nke gbara ọkpụrụkpụ gbanwee ọdịnaya ma ọ bụ usoro nwekwara ike ịbụ ihe kpatara ị ga-achọ iji tọgharịa blog gị. Ka ị na-agbanwe, etu ahụ ka blọọgụ gị na ọdịnaya ị na-ewepụ dị. Ọ bụrụhaala na e nwere ihe jikọrọ ya na ya niile ị nwere ike ịga n'ihu, mana otu oge ntụgharị dị nkọ na-eme nke nwere ike ọ gaghị ekwe omume.
Ma eleghị anya, ịchọrọ ịmegharị ihe, ma eleghị anya ọdịnaya ị na-ewepụta bụ nke oge edere ya (ịgbaso mkpọsa maka ngwaahịa ọhụrụ dịka ọmụmaatụ) ma tinyeghị ya ugbu a. N'agbanyeghị ihe kpatara mgbanwe a, enwere ike ịbịa ebe ịrapagidesi ike na ọdịnaya ị na-achọghị bụ ihe efu na mmalite ọhụụ dị mkpa.
Ebe ọ bụ na ịtọgharị saịtị gị zuru ezu wepu ọdịnaya gị niile bipụtara (ihe niile na ibe) yana ịbụ onye ikpeazụ na enweghị ike ịgbanwe agbanwe ịkwesịrị iche echiche nke ọma tupu ị gbadaa n'okporo ụzọ a. Ihe abụọ gara aga anyị kpọtụrụ aha bụ ndị dabeere na teknụzụ karịa ihe ọ bụla (sọftụwia ga-abụ ihe ziri ezi). Otu onye a, karia ihe kariri ihe di nkpa karie ihe di nkpa ma ya mere o choro ka oge di nkpa na atumatu ogologo oge maka blog, ya mere - chee echiche nke oma ma chee echiche abua tupu ime ihe.
Imechi blọọgụ gị
N'ikwekọ na ihe ndabere dabeere na ọdịnaya tupu oge eruo, nke a bụ otu na-agbaso ụdị echiche yiri nke ahụ. Imechi blọgụ gị maka ihe ọ bụla kwesịrị ijikọ ya na omume ụfọdụ iji kpuchido ojiji ọ bụla. Cheedị echiche inwe ihe gwụrụla ọtụtụ afọ mgbe blọọgụ gị nwụsịrị ma jiri ya mee ihe n'ụzọ na-abụghị naanị na ị chọghị kama ọ na-emerụ ahụ. Iji zere ọnọdụ ndị dị ka nke a, ọ bụ ezi echiche ịhichapu ihe ọcha tupu ị pụọ n'ịntanetị maka ihe ọma.
Ugbu a, anyị niile maara na ihe ọ bụla na-egosi na weebụ na-anọ ebe ahụ ruo mgbe ebighi ebi n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, mana ịkwesighi iji ọdịnaya ọlaọcha debe ọdịnaya gị. Tọgharị blog gị pụtara na a na-ehichapụ ihe ndekọ ederede nke ọdịnaya mbụ gị na posts na ibe. Nke ahụ pụtara na belụsọ na onye bi na mpaghara echekwala ọdịnaya ahụ mgbe edepụtara ya, ọ ga-esiri ya ike ịbịaru ya.
Dị ka anyị kwurula iwepụ ihe na ịntanetị agaghị ekwe omume, mana iji obere omume ole na ole, ịtọgharị ịbụ onye mbụ n'etiti ha ị na-echekwa onwe gị na akụ ọgụgụ isi gị. Na mgbakwunye na nke a, ị gaghị ehichapụ blog gị kpamkpam, kama itinye ya na hiatus nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide nke ị nwere ike ịlaghachi n'ọdịnihu. Gaghị enwe ike ịga n'ihu site na ebe ị kwụsịrị, mana a ga-enwe ntọala siri ike ka ị rụọ ọrụ.
Ruo ugbu a, ihe kpatara ya niile abụchaghị maka ọdịmma, mkpebi azụmaahịa, ma ọ bụ maka udo nke obi. Enwere, ọ dị nwute, ihe na-enweghị isi maka mkpa iji tọgharịa saịtị. Chọpụta na anyị ejirila okwu ahụ bụ “mkpa” na “achọghị”. Ọ bụrụ na enwere nsogbu nchebe na saịtị gị na ọdịnaya dị na ya nwere ike ịdaba na ịchọrọ "mkpa" ịme ihe ndị kwesịrị ekwesị. Na-agbanwe, emelite na upgrading gị ntọala nche N'ezie, ọ bụ ihe mbụ ị kwesịrị ilebara anya, mana ọ bụghị naanị ya.
Anyị ekwuolarịrị na ọtụtụ oge enwere ụdị nkwado ndabere maka ndị na-eweta ngalaba ahaziri ha aka, yabụ nrụpụta zuru ezu abụghị ihe ị ga - atụ ụjọ. Site n'ime ya ị na-echebe onwe gị na blọọgụ na ọdịnaya gị pụọ n'ihe egwu ahụ mere na ihe egwu ọ bụla nwere ike ịda.
O yiri ka anyị na-ajọwanye njọ, mana ndị a bụ ihe niile kpatara ị nwere ike izute nke nwere ike ime ka ị zuo ike na saịtị gị. Dị nnọọ ka ịda iwu nchekwa, mgbe ị na-eche ikpe ọ bụla gbasara iwu (nke bụ nke ikpeazụ n'okporo ụzọ, ọ bụghị naanị na usoro ahụ) enwereghị ọtụtụ ihe ị nwere ike ịme kama rube isi mgbe ike gwụchara ihe ndị ọzọ.
N'agbanyeghị usoro ị nyere, ọkachasị ọ bụ imechi blọọgụ / saịtị gị, ọ bụ ihe amamihe dị na ịme nhazi zuru ezu tupu ị rube isi. Anyị ekpuchilarị ihe kpatara nke a ji dị mkpa na otu esi eji ya n'ụzọ ị na-achọghị ma ọ bụrụ na ịnweghị ụdị nlekọta ndị a dị oke egwu.
Usoro ziri ezi nke omume n'ọnọdụ ndị a ga-abụ iwu-ịtọgharị-gaa na-anọghị n'ịntanetị. Nọgide na nke a, ị nwere ike ịnweghachi ihe ọ bụla site na ọnọdụ dịlarị njọ ma ghara ime ka ọ dị njọ karịa ka ọ dị.
Ma n'ebe ahụ ị nwere ya. Isi ihe isii mere ị ga-eji chọọ ịtọgharịa saịtị gị, n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụ akụkụ. Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị n’otu n’ime ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, ọ ga-abụrịrị oge iji tụlee ihe dịka nke a, ọbụlagodi na ọ nwere ike iyi ihe siri ike. Mgbe ụfọdụ, usoro dịka ndị a bụ naanị ndị fọdụrụ.
Tags: tọgharịa wordpressWordPresswordpress plugin
Bryan Mixon bụ onye nwe AmazeLaw, ụlọ ọrụ weebụ maka ndị ọka iwu naanị na obere ụlọ ọrụ. Byran na-ewu weebụsaịtị kemgbe 1999 ma jiri afọ anọ gara aga nyere ụlọ ọrụ dị ka HubSpot, Mill33 na LivingSocial aka. Bryan maara nke ọma otu o si sie ike maka ndị nwe obere azụmaahịa iji nweta ahịa ahịa dijitalụ ha, yabụ o wuru AmazeLaw dị ka ebe dị mfe maka ndị ọka iwu na-ewu ewu iji wuo saịtị ha, chịkọta ndị ndu ma banye ụbọchị ha na-eme ihe gbasara ọkaiwu.